Budada FEP ee ugu Fiican (DS605) dahaarka waalka iyo tuubooyinka, buufinta korantada wax soo saarka iyo Warshada |Huaxia Shenzhou
Shayga Unug DS605 Habka/Heerka Imtixaanka
Tusmada dhalaalaysa g/10 daqiiqo 0.1 GB/T3682
Celceliska Xajmiga Walxaha μm 10-50 /
Meesha dhalaalaysa ℃ 265± 10 GB/T28724
Qoyaanka,≤ % 0.05 GB/T6284
DS605 waxaa loo isticmaali karaa buufinta electrostatic, waxaa la sintered karaa gudahood kala duwan oo ah 300-350 ℃, la iska caabin aad u fiican in ay dillaac stress, caabbinta kiimikada heer sare ah, iska caabin kulaylka fiican, hantida ugu fiican ee aan ulo, hantida korantada aad u fiican, iska caabin cimilada, iyo gubasho la'aan.
Heerkulka warshadaynta waa in aanu dhaafin 420 ℃, si looga hortago in gaaska sunta ah uu soo daayo.
1. Waxaa ku jira bac tolan, iyo fuustooyin wareeg ah oo adag oo dibadda ah. Miisaanka saafiga ah waa 20kg durbaankiiba.
2. Waxaa lagu kaydiyaa meel nadiif ah, qabow oo qallalan, si looga fogaado wasakhaynta walxaha shisheeye sida boodhka iyo qoyaanka.
3.Nontoxic,nonin ololi karayn,aan qarxin,daxal lahayn,alaabta waxa loo raray si waafaqsan sheyga aan khatarta ahayn.
Hore: PVDF(DS2011) budada dahaarka
Xiga: FEP Dispersion (DS603A/C) dahaarka iyo uurka